Wabiga Shabelle Oo Laga Baqayo In Uu Ku Fataho Deegaanno Ka Mid Ah Shabellaha Dhexe – Goobjoog News
Wabiga Shabelle Oo Laga Baqayo In Uu Ku Fataho Deegaanno Ka Mid Ah Shabellaha Dhexe
Shacabka ku dhaqan deegaanno ka mid ah gobalka Shabellaha Dhexe ayaa ka baqaya in deegaanno badan oo ka mid ah gobalkaasi uu ku fataho wabiga Shabelle, xilli dad badan ay dhibaato kasoo gaartay fatahaada uu sameeyay wabigaasi.
Shacabka ku dhaqan deegaano hoostaga degmada Mahadaay ee Shabellaha Dhexe ayaa u sheegay Goobjoog News in dadka oo dhibaato haysato aan loo gurman, lagana cabsanayo in fatahaada ay deegaano kale gaarto.
Dadkani ayaa sheegay in lagu eegtay xaaladda ka jirta deegaanadooda, islamarkaana aan wax gurmad ah lala soo gaarin.
Dhinaca kale Tuulooyin badan oo hoostaga degmada Balcad ayaa iyaguna laga soo sheegayaa in ay ka dilaaceen cudurada shuban Biyoodka iyo Duumada, kuwaasi oo sababtooda la sheegayo inay tahay biyaha dhex ceegaaga tuulooyinkaasi ka dib Fatahaadii uu sameeyay Wabiga.
Sahacabkaan ayaa ugu baaqaya maamulka Gobalka Shabellaha Dhexe, dowladda Federaalka iyo Hay’adaha samafalka ah in gurmad degdeg ah lasoo gaaraan, si xaaladooda wax badan looga qabto.